Date: 2011-12-14 00:39:11
Guddoomiye Ku xigeenka Barlamanka ku meel gaarka Soomaaliya cabdiweli Muudeey oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay Fadhigii qaar ka mid ah Xildhibaanada Barlamanka shalay ay ku qabteen Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Muudeey ayaa kulankaas xildhibaanada ku tilmaamay mid sharci darra ah isla markaana ay soo abaabuleen xubno barlamanka ka tirsan oo si gaar ah isugu leexday waa siduu hadalka u yiriye.
Guddoomiye ku xigeenka oo ka hadlayay Go’aankii ay mudanayasha gaareen ayaa ka codsaday in ay ka laabtaan Go’aankaas isla markaana ay ka qaadista Guddoomiyaha Barlamanka Xilka Guddoomiyanimo u maraan waddo sharci ah.
Guddoomiye ku Xigeenka Koowaad ee Barlamanka ayaa sheegey in xildhibaanadii shalay Fadhiga ku yeeshay Golaha shacabka ay sharciga jebiyeen isagoona ku sugan magaalada Muqdishana aan lagu soo war gelin kulankaas taasoo uu sheegey in inta jabsadeen Xarunti Golaha shacabka ay shir Fowda ah ku qabteen.
Arrintan ayuu Muudeey ku sheegey mid wax u dhimaysa sumacadda Barlamanka isagoona ku celiyay dalabkiisii ahaa in mudanayaashaas ay waddo sharci ah u maraan xil ka qaadista Shariif xasan.
Hadalkan ka soo yeeray Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee barlamanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalinimadii shalay Xubno xildhibaana ah oo gaaraya illaa laba boqol iyo sideetan ay shir ku qabteen Xarunta Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho dabeetana xilkii kaga qaadeen Guddoomiyaha Barlamaanka Shariif Xasan.
Ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay Madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Ra’iisul wasaaraha iyadoo arrimahan oo dhanna ay dhacayaan xilli uu guddoomiyaha barlamaanka federaalka Soomaaliya uu dalka ka maqan yahay kaasoo sida la sheegay haatan ku sugan Dalka Talyaaniga.
Isku soo wada duuboo Barlamanka ayaa iminka u qaybsamay laba garab kaasoo midna uu Guddoomiyuha ka soo hor jeedo halka dhinaca kalena uu taageersan yahay Guddoomiyaha Barlamanka Federaalka Soomaaliya.